शुरु भयो विद्युतीय सवारीको युग, सुन्दर यातायातको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा - Pahilo Click
शुरु भयो विद्युतीय सवारीको युग, सुन्दर यातायातको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा
काठमाडौँ: पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई कम गर्दै मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले लिएको नीति व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्राधिकरणले अब चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनका लागि लोड स्वीकृतिलगायतका अन्य काम पनि पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निकट भविश्यमा नै अन्य नीतिगत निर्णय गर्ने र आक्रामकरुपमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनेछन् । त्यसो त प्राधिकरण र साझा यातायातबीच पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । रासस
डिकी एवं छतभित्र पशुपक्षी ढुवानी गर्दै हुनुहुन्छ? सावधान ! कारवाहीमा पर्नुहोला
रेलिगेसनबिनाको ‘ए’ डिभिजन लिग असोज देखि गर्ने प्रस्ताव
डब्लूएचओको चेतावनी– युवा पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा
‘कालो सुन’को कमाल: उकासियो आर्थिक हैसियत